Nin Tuug ah oo ku baxsaday diyaarad Ra’iisul wasaare – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaNin Tuug ah oo ku baxsaday diyaarad Ra’iisul wasaare
Hiiraan Xog, Apr 19, 2018:- Nin ku jiray xabsi ku yaala dalka Iceland ayaa la sheegay in uu ka baxsaday xabsigii uu ku xirnaa, kadibna uu dalka dhan kaga baxay diyaarad ay saarnayd haweenayda Ra’isulwasaaraha dalkaas ka ah.
Ninkan oo lagu magacaabo Sindri Thor Stefansson ayaa lagu eedeeyay in uu xaday illaa 600 oo kumbutuutar oo ah kuwa laga dhaliyo lacagta internetka ee Bitcoin, kuwaas oo qiimahoodu joogo illaa $2 milyan oo doolar.
Waxa uu raacay diyaarad rakaab ah oo ay dhinac ka saarnayd Ra’isulwasaaraha, isaga oo isticmaalay tigid uu ku qoranyahay magaca qof kale, balse markii dambe ayaa laga aqoonsaday kaamarooyinka garoonka.
Waxa uu u baxsaday dalka Sweden, halkaas oo ay diyaarada uu raacay ku socotay.
Ra’isulwasaaraha Iceland Katrin Jakobsdottir ayaa kusii jeeday Sweden, halkaas oo ay kaga qeybgalaysay shir ay leeyihiin 5 Ra’isulwasaare oo Yurub ah iyo Ra;isulwasaaraha Hindiya Narendra Modi.
Waaran xarig oo caalami ah ayaa loo jaray ninkan, waana la baadi goobayaa.
Sidee lagu ogaan karaa haddii uu dhacay weerar hubka kiimikada?